आज वर्षकै पहिलो शनिवार ! तपाइको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् आजको राशिफल!
आज मिति बिक्रम संवत २०७६ साल बैशाख महिनाको ७ गते शनिवार तदनुसार सन् २०१९ अप्रिल २० तारिख तपाईको दिन कस्तो रहला ,हेर्नुहोस तपाईको आजको राशिफल
कार्यमा सफलता मिल्नेछ।प्रतिस्पर्धात्मक कार्यमा विजय हासिल गर्न सकिने दिन रहेको छ। दाजु भाईको सम्बन्धमा मेलमिलाप हुनेछ। स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ। भाग्योदय्को योग रहेको छ। आर्थिक लाभ हुने सम्भावना रहेको छ। समग्रमा तपाईको आजको दिन शुभ रहेको छ।
स्वास्थ्यमा बिशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने छ। शारीरिक स्फुर्तिमा कमि आउने छ। कार्यमा सोचे अनुरुपको सफलता मिल्ने छैन। विदेशस्थित आफन्तमार्फत सुभ समाचार सुन्न पाइने छ। प्रतिष्पर्धात्मक कार्यमा सकेसम्म सहभागी नहुदा नै उचित हुनेछ। समग्रमा कुम्भ राशी हुनेहरुका लागि आजको दिन सामान्य रहेको छ।
प्रकाशित : शुक्रबार, बैशाख ०६, २०७६१४:३९